Si diirran ugu dabaal daga guusha guusha Beilida inthe2013 China (Nanjing) carwada caalamiga ah ee qurxinta carwada
Shirkadda waxay leedahay wax soo saar sanadle ah oo ah 40000 tan oo fiber kiimiko ah, iyo fiber-ka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa in lagu sameeyo dharka sare, dharka xirmada, dharka hoosta laga xirto, sharaabaadyada, galoofyada, gacmo-gashiga, xargaha iyo waxyaabaha kale.
Si diirran ugu dabaaldeg guusha guusha naqshadeynta daah gogosha daahyada (Shanghai) gole shir!
Naqshadeynta daahyada naqshadda daahyada (Shanghai) shir weynaha "naqshadeynta iyo cilmi baarista derbiga daah-furka sare" waxaa iska kaashaday machadka naqshadeynta naqshadaha casriga ah ee bariga Shiinaha naqshadda dhismaha iyo machadka cilmi baarista, ltd., Ururka Shiinaha ee dhismaha. khubaro albaabka daaqada iyo khabiirada daaqadda iyo joornaalka farshaxanka dhismaha ayaa si guul leh ku soo gabagaboobay November 16, 2013 hoolka sayniska Shanghai
Beilida waxay dhiseysaa daahyada daahyada GFRC daahfurka Xarunta Olombikada dhalinyarada Nanjing
Mashruuca Xarunta Dhallinyada Olambikada ee Nanjing ee bariga degmada Jianye, Nanjing City, wejiga harta. Qaab-dhismeedka mashruucaan wuxuu ka socdaa Zaha Hadid, xaruntu waxay u egtahay meel lagu safrayo, waxay la micno tahay "dhalinyarada meel fog iyo bad ballaaran". Mashruucan ayaa ah midka ugu adag ee lagu taageerayo dhismayaasha loogu talagalay Xarunta Dhallinyada Olambikada. Mashruucu wuxuu daboolayaa dhul dhan 52000m2, bedka dhismaha wuxuu gaarayaa 480000m².
Beilida wuxuu ku guuleystay 'lamaanaha ugu wanaagsan' ee Milky SOHO
Maalmihii la soo dhaafay, "Shirweynaha amaan ee Milky SOHO" ayaa lagu qabtey goobta loo yaqaan 'Beijing Milky SOHO', shirkaddeena nasiib ayey u leedahay inay ka qeybqaadato dhismaha mashruucan, waxayna ku guuleysatay "lamaanaha ugu wanaagsan" cinwaanka. Aad ayaan ugu faraxsanahay shaqaalaha Beilida, waa shaqadaada adag ee abuurtay mucjisadan naqshadaha dhismaha.
Beilida wuxuu dhisayaa "Tangshan Space Saddexaad" GFRC daahyada derbiga
Mashruucu wuxuu ku yaalaa Magaalada Tangshan, oo daboolaysa 12000m2. Qaabkan ayaa ah mid xariif ah, qaabdhismeedka istiraatijiyad goosgoos ah, saxan balaaran oo balaaran oo balaaran oo balaaran leh.
Matxafka Kacaanka ee 1911 wuxuu leeyahay guud ahaan dhismo dhan 22,000 ,12,400. Mashruucan, Belinda wuxuu adeegsadaa 200 ㎡ oo ah darbiyada darbiga daahyada leh dusha sare ee dhagaxa dabiiciga ah, 700mm oo ah saqafka saqafka iyo xakamaynta iskudhaca, XNUMX㎡ ee aagga caaryada, iyo tikniyoolajiyada daaweyn sawir-qaadista waxaa lagu dabaqayaa GFRC ee darbiga bannaanka, taas oo ka dhigaysa GFRC inay leedahay astaamaha is-nadiifinta ee ah sidii ugu wanaagsanayd muddo dheer.